Izindaba - Umholi womthombo wokukhanya onempilo we-2020 - I-ShineOn ihamba nawe
Umholi womthombo wokukhanya we-2020 onempilo - i-ShineOn ihamba nawe
Unyaka wezi-2020 ubonele amandla amaningi emvelweni. Enqubeni yokuzivumelanisa kabusha phakathi komuntu nendalo, umbukiso wase-Guangzhou International Lighting Exhibition, osehlehlisiwe cishe izinyanga ezintathu, ugcine uqalile. UShinon ubelokhu enamathele emzileni wobuchwepheshe 'wokukhanyisa okunempilo'. 'Njengomholi womthombo wokukhanya onempilo', uShineon ukhombise imikhiqizo egxile ekusebenziseni izidingo zamakhasimende emithonjeni esezingeni eliphakeme yokukhanya.
IPazhou Exhibition Hall 10.2 C02 idokodo laseShineon, elibonisa uchungechunge oluhlukahlukene lwemikhiqizo ye-shineon.
UShineon uphakamise umqondo ophelele wokukhanyisa okunempilo ekuqaleni kuka-2016, futhi wahola ekuboniseni imikhiqizo egcwele ngokugcwele ngo-2017. Manje ibilokhu ipholishiwe ngokuqhubekayo futhi iphonswa ochungechungeni oludala olunezihloko: Uchungechunge olubukeka ngamehlo, uchungechunge lokuvikela iso , Uchungechunge lweSunshine, nochungechunge lwamafilimu nolwethelevishini. Uchungechunge oluncane lususelwa kuzidingo zamakhasimende kanye nezimo zohlelo lokusebenza ezihambisanayo, okunikeza ukudlala ezinzuzweni ezahlukahlukene zochungechunge lwezibani ezigcwele. Isici esivamile ukusetshenziswa kwamandla aphansi futhi kunempilo.
* Uchungechunge lweRa98 Kaleidolite lunezinzuzo zokunikezwa kombala okuphezulu, ukuthembeka okuphezulu nokugcwala okuphezulu.
* Uchungechunge lokuvikela iso lunezici zokuqhubeka okuhle kwe-spectral nokukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka okunamandla amancane.
Kuvame ukusetshenziselwa ukufundisa izigcawu ukuvikela kangcono ukubona kwamehlo.
* Uchungechunge lwe-Sunlight lunokunikezwa kombala okungcono ngenxa yokuthi i-violet spectrum yalo isondele elangeni.
Kuvame ukusetshenziswa ezimeni ezifana nokukhula kwezitshalo, inzalo kanye ne-antibacterial.
* Uchungechunge lokukhanyisa isitudiyo lunenkomba ephezulu ye-TLCI, efanelekile ekusetshenzisweni kokukhanyisa okwengeziwe kwezithombe.
Imikhiqizo ye-COB ingenye yemikhiqizo eyinhloko kaShineon. Ukunamathela kumqondo wemithombo esezingeni eliphakeme, yokusebenza okuphezulu, nokukhanya okunempilo, yethule ngokulandelana isibuko se-aluminium COB chungechunge, uchungechunge lwe-cob cob, uchungechunge oluphelele lwe-COB, nochungechunge lokushisa oluguquguqukayo lwe-COB ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ezahlukahlukene.
* Uchungechunge lwe-Aluminium COB lunezinzuzo zokukhanya okuphezulu nokusebenza okuphezulu kokushisa okushisayo;
* Uchungechunge lwe-Cob COB lunezinzuzo zokumelana nomfutho ophakeme futhi akukho bungozi bokuqothuka;
* Uchungechunge oluphelele lwe-COB lunezinzuzo zokulimala okuphansi okuluhlaza okwesibhakabhaka, ukusebenza kahle kokukhanya okuphezulu, nokunikezwa kombala ngaphandle kokuhlanekezelwa;
* Imikhiqizo yochungechunge lokushisa kombala we-COB inezinzuzo zebanga lesicelo samandla ebanzi, ububanzi bokulungiswa kombala wokushisa, i-CRI ephezulu nokusebenza kahle okukhanyayo. Zingasetshenziswa ezigcawini ezahlukahlukene njengokukhanyisa ekhaya, ukukhanyisa enxanxatheleni yezitolo, iminyuziyamu, izinkundla zezemidlalo, njll.
Ukushintshwa kombala kwe-SHINEON okuguquguqukayo kokushisa kwe-COB series
Esigcawini esifanayo, imiphumela ehlukile ye-CRI iyaqhathaniswa
Ithimba le-R & D lobuchwepheshe likaShineon linikeza isiqinisekiso esiqinile sokuhlukaniswa komkhiqizo nezicelo zezimo eziningi, ezifana nemikhiqizo emisha yochungechunge lwe-UV, uchungechunge lwefoni yeselula, uchungechunge lwe-DOB module, njll, olunezinhlobonhlobo zezinhlelo zokusebenza zemakethe. Ngokuya nge-R & D eqinile ye-R & D namandla wokukhiqiza, singanikeza amakhasimende ngezixazululo ezenziwe ngezifiso zemithombo ekhethekile yokukhanya.